मैले योजनाहरू स्विच गरेपछि नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेट तुरून्तै प्राप्त गर्छु?
हो, प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मेरो योजना स्विच गर्ने अनुरोध सफल भयो भनी कसरी थाहा पाउन सक्छु?
सफल स्विच योजनापछि, ग्राहकलाई सूचना दिने SMS सूचना पठाइनेछ। नि:शुल्क डेटाको मजा लिन SMS प्राप्त गरेपछि ग्राहकले टप अप गर्न सक्नुहुन्छ।
म हाल अर्को मोबाइल सेवा प्रदायकको ग्राहक हुँ। म U मोबाइलको असीमित पावर प्रिपेड योजनामा पोर्ट गर्न सक्छु?
सक्नुहुन्छ। कृपया नजिकको U मोबाइल पसल/डिलरहरू वा पोर्टलाई अनलाइनमा http://u.com.my/mnp मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
UMI योजनाहरूमा कसरी सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ?
तपाईंले यस मार्फत पनि सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ:
UMB *118*3*1*1# डायल गरी तपाईंको रोजाइको UMI चयन गर्नुहोस्। अथवा,
सम्बन्धित UMI योजनामा सदस्यता लिन तलका किवर्डसँगै 28118 मा SMS गर्नुहोस्।
UMI 20 UMI 20 मा
UMI 25 UMI 25 मा
UMI 30 UMI 30 मा
UMI 38 UMI 38 मा
UMI 50 UMI 50 मा